Laaska News – Wadahadalka TFG da Iyo SL Waa Qayb Kamid Ah Jaahwareerka Lagu Hayo Soomaali | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > Faallo	> Laaska News – Wadahadalka TFG da Iyo SL Waa Qayb Kamid Ah Jaahwareerka Lagu Hayo Soomaali
Ilaa iyo intee ka dambaysay shirkii looga hadlayay arrimaha Soomaaliya ee London ee ay kasoobaxeen inay wadahadlaan xukuumadda TFG da iyo Somaliland waxay shacabka Soomaaliyeed meel ay joogaanba isweydiinayaan waxa ay tahay ujeedada rasmiga ah ee wadahadalada ay yeelanayaan labada dhinac? Waxa keenay waqtigan in la wadahadlo oo ay xukuumadda TFG du tahay gabagabo oo waqtigeedii dhamaaday?.
Waxaana warbaahinta laga maqlay warar kala duwan oo haddana is dhaafsan oo qolo walbaaba ay si gooni ah uga hadasho ama dadkeeda ugu sheegto,waxaana ku abuurmay shacabkii jaahwareer hor leh oo aan loo meel dayin,sidoo kale waxaa abuurmay shaki farabadan oo laga qaado labada dhinac,waxaana soobaxay eedeymo,aamin darro iyo in lagu heshiin waayo guddiyada la sheegay inay kaqayb galayaan wadahadalada ama lagu qanci waayo.
Xukuumadda Soomaaliya waxay sheegtay in danta Umadda Soomaaliyeed laga wadahadlayo,midnimada horumarinta dalka,dadka,nabadgalyada, dhaqaalaha ama waxyaalaha lakala tabanayo oo layska qancinayo IWM.
Somaliland ayaa iyagu sheegay 1991 inay yihiin dawlad ka madaxbanaan Soomaaliya oo ay madax banaanidoodii lasoo noqdeen,hase ahaatee “aqoonsi ay caalamka ka helaan iska daaye, aanay aqoonsan beelaha ay daris wadaagga yihiin”,inkastoo ay jiraan rag badan oo beelaha kasoojeeda oo kamid ah maamulkooda.
War ma beentayba!
Somaliland ayaa dhinaceeda dhawr jeer sheegtay in loo wadahadlayo laba dawladood,danaha naga dhaxeeya,waxayna ugu dambeyntii sheegtay in wadahadaladu ay noqonayaan in ay soomaaliya ay yihiin dad walaalo ah oo dawlad wada lahaa oo kalabaxay,islamarkaana laga wada hadlayo mustaqbalka iyo wax wada qabsiga,taasoo macnaheedu yahay laba dal oo jaar ah!
Inla wadahadlo ma Somaliland bay ka timid?
Ma TFG da? maxayse tahay danta deg degga ah ee labada dhinac ugu jirta? Labada dhinacse kalsooni maka haystaan shacabka ama beelaha deggan dhinaca ay sheeganayso inay ka taliyaan?
Wadahadalada mawaxaa ku haboonaa odayaal iyo waxgarad mise Siyaasiyiin?
Labada dhinac keebaa ka tanaasulay waxay sheeganayeen oo khiyaamay umaddii Soomaaliyeed ee uu sheegay inuu wakiilka ka yahay ugana yahay midnimo & Qaranka Soomaaliyeed (TFG da) iyo waan kogo’nay Soomaaliya ama waan kabaxnay oo waxaa nala yidhaahdaa Somaliland!
Kalago’ iyo Israac labada dhinac ma keeni karaan mise kala fogaansho hor leh?
Mise waddan shisheeye ah oo dano gaar ah ka leh dalka iyo dhulka Soomaaliyeed ayaa keenay in la wada hadlo? gaar ahaan Ingiriiska?
Ilaa iyo hadda ma jiraan ajande cad oo la sheegay oo looga hadlayo shirkaa lagu baaqay.
Sidoo kale ilaa iyo hadda shacabka Soomaaliyeed meel ay joogaanba ha aaminsanaadeen midnimo ama kala go’ kama aysan helin labada dhinac jawaab waafiya oo ay ku qanciyaan oo kusaabsan waxa wadahadaladu yihiin.
Haddaba miyaanay ahayn jaahwareer hor leh oo umadda Soomaaliyeed haysta,lagana yaabo in mas’uuliyiinta labada dhinac ay umadda la wadaagaan jaahwareerkaa oo aysan iyaguba ogayn waxaa laga wadahadlayo.
Waxaana isa sootaraya warar sheegaya in wadahadalku uusan ahayn labada dhinac oo kaliya oo ay jirto gacan saddexaad oo dhex joogta kana qaybgalaysa shirkaas la sheegay inay yeelanayaan!
Ugudambayntii waxaa muuqata in ay jirto ‘middi roorin’ ay wadaan dhinacyada midkood ama gacanta saddexaad ee lagu arki doono shirkaas.
Waxaana umadda Soomaaliyeed ku wargalinayaa inaysan dheg udhigin wadahadalka TFG & SL sababtoo ah maaha “ciddii wada hadli lahayd”,“xaqna uma leh labada dhinac midkoodna”,waana qayb kamid ah jaahwareerka lagu hayo umaddawax kasta oo kasoobaxa oo ka hor yimaada “masiirka,maslaxadda umadda iyo dalkana aan cidna laga aqbalayn”.
Waxaana la gudboon labada dhinac inay safarada,shirarka iyo kulamada ay kuluminayaan dibadda inay ku baddalaan inay qolo walbaaba ay gudaheeda safar ugasho.
“Sababtoo ah dalka ragbaa udhintay oo awoowayaashood udhinteen xorriyadiisa”.
Hantida Umadda ka dhexaysa ee aad gacanta ku haysaan ee ay kamid yihiin dekaduhuna yaan laydinka qabsan,adduunka war umahaysaan waxa ka taagan dhaqaale xumo,wuxuu marayaa 1884 kii.
Ku quuso halka uu Ruushku maanta difaac kaga jiro oo uu leeyahay rabshadaha Suuriya waaba waddo aniga la’isoo marayo.
Adduunka wax “la dhisayo” iyo “wax la aqoonsanayo” midna ma jirto.
Shaqada adduunka kasocota waa la dagaanka waxa loogu yeedho ama lagu magacaabo” la dagaalanka argagaxisada”.
Haddii dagaalka Bariga dhexe uu sii xumaadana meesha la beegsanayo waa waa marinka biyoodka Soomaaliya iyo dekadaheeda.Adduunka wax dihinna waxaa jira Afrika,halkaas ayaa laysugu iman!!!!
Somaliland Oo Sheegtay Guddi Cusub Oo Uga qayb galaya Wadahadalada TFG da – June 15, 2012
Declaration of the Stanbul II Conference On Somalia (Shirkii Istanbul2 June 1, 2012)
Shirkii Istanbul 2 Ee Soomaaliya ,Qodobabada Warmurtiyeedka June 1, 2012
Shiikh Shariif Iyo Faysal Cali Waraabe Oo Kulmay – April 27, 2012
Somaliland Kama Qayb Galayso Wadahadalka TFG da Haddii Aan Wax Laga Badalin——- FM -April 19, 2012
Siilaanyo Oo Sheegay Kalsooni “Danta Iyo Madax Banaanidu Ay Ku Jirto” Wadahadalka TFG v Somaliland – Apr. 15, 2012
Soomaaliya -Madaxweyne Shariif Oo Magacaabay Guddiga TFG da Ee Wada Hadalada TFG VS Somaliland – Apr. 14, 2012
Somaliland Oo Faahfaahin Ka Bixisay Guddiga Wadahadalada Somalia Iyo Somaliland – Apr. 10, 2012
Somaliland Oo sheegtay Inay Magacawday guddi Wadahadal La Galaya TFG da – Apr. 8, 2012
Shiikh Shariif Oo Sheegay “In Madaxdii Somaliland Ay Hadal Wanaagsan Jeediyeen”,Wada Hadalna Lagalayo -Feb. 27, 2012
Dawladda Soomaaliya Tafsiir Haka Bixiso Qodobada Shirka London – Feb. 27, 2012
Shirka London Oo Lasoo Gabagabeeyay – Qodabadii Feb. 23, 2012
Shirka London Ha Lagu Daro – In Ladhiso Ciidanka XDS iyo Talooyin Ku Socda Ka Qayb Galayaasha Feb. 23, 2012
Aas Qaran -“Marxuum Sh Mukhtar” Afhayeenkii Hore Ee Baarlamaanka 1969 Somaliland Oo Sheegtay Guddi Cusub Oo Uga qayb galaya Wadahadalada TFG da